Maty ve ny Fatbikes? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Fat bisikileta com - vahaolana amin'ny olana
Fat bisikileta com - vahaolana amin'ny olana
Maty ve ny Fatbikes?
Mpitaingin-tsoavaly maro no manohy mankafy bisikileta matavy mandritra ny vanim-potoanan'ny ririnina ary hanatsara sy hanolo ny bisikileta rehefa reraka. Ny marika bisikileta dia azo antoka fa ho avy sy handeha, fabisikileta matavytsy hanjavona mandrakizay. Ny marika bisikileta dia azo antoka fa ho avy sy handeha, fabisikileta matavytsy hanjavona mandrakizay.
Rahampitso Trainiacs Manana andro mampihetsi-po isika, andro mahafinaritra foana izany Marina izany, andro bisikileta vaovao izao azoko antoka fa Canyon Dude Fatbike izao, miaraka amin'ny olona maro izay tsy afaka mandeha bisikileta matavy amin'ity ririnina ity mividy izany no lazain'ny fivarotako bisikileta, raha te hividy bisikileta matavy ianao dia hanazava anao ny torolàlana feno ho an'ireo vao manomboka manangana ny bisikileta matavy voalohany anao ity bisikileta matavy ity no laharana roa fotsiny ho ahy, fa avy amin'ny winnipeg aho, Ka toy ny proso aho hoe maninona no manampy iray hafa bisikileta hafa tsara fa tsy mahasolo bisikileta bisikileta maro be ara-teknika no kendrena hivezivezena amina làlana tena manjavozavo ankehitriny dia afaka mitaingina ireo làlan-kaleha tsy tena izy ireo ianao nefa tsy izany tena ilaina aho mino aho fa ny bisikileta an-tendrombohitra dia fitaovana tsara kokoa ho an'ity raha mikasa ny hitaingina be eny amoron-dranomasina na amin'ny lanezy ianao, noho izany dia ho an'ny olona antonony izay mipetraka amin'ny faritra misy toetr'andro tsara izay mety tsy ilainao izany. mahafinaritra fa tsy ilaina izay tiako ampiasana azy fa tsy tena excep technique t ho an'ny bisikileta an-tendrombohitra no ampiasaiko irery mandritra ny adiny roa maharitra ny zotra. Ny dia mandritra ny adiny roa dia ny hivoahana ary tsy hanao ny zava-drehetra ao anatiny rehefa tsy mila voafaritra tsara ny fomba hampiasako ny Zlift ho an'ny fampihetseham-batana mandritra ny ny herinandro, hampiasaiko amin'ny fitsangatsanganana adiny iray amin'ny ankapobeny na fitsangatsanganana mandritra ny roa na telo ora amin'ny faran'ny herinandro ka aza atao izany ho solon'ny bisikileta an-tendrombohitra na inona na inona heverinao ho fitaovana ahafahana mitaingina any ivelany eny amin'ny toerana misy lanezy na fotaka na fasika ary tsy mila manao ny zava-drehetra ao anatiny ary tsy manantena ny hanao io fiezahana lehibe io, fa vao mainka aza satria ny famolavolana lava fotsiny dia tsy mikapoka elanelam-potoana ahazoana fahefana lehibe , tsy natao ho an'ny kodiarana be loatra ny kodiarana, fa raha ny natiora dia miafara amin'ny fampihetseham-batana goavambe ianao eto no zavatra mahafinaritra amin'izany raha ny fahitako azy, satria mora fitaovana fotsiny io, tsy natao ho an'ny tena manokana. fampiofanana na azo antoka fa tsy fampisehoana hampihena amin'ny teti-bola. Nahita olona nitaingina fiara niaraka tamiko aho ary nandeha bisikileta nilanja 900 $ nandritra ny roa taona. Ny fanovana sasany amin'ny bisikileta dia hazavaiko vetivety fotsiny mba hahitana fampisehoana tena tsara, fa ny fototra ilainao dia frein disc satria izany dia kodiarana maro hanakanana ny mety sy ny haben'ny kodiarana ary tsy mila be loatra ianao azonao atao ny mampiasa kiraro ririnina Afaka mampiasa pedal amin'ny lampihazo ianao Afaka mampiasa fefy aliminioma satria na mandeha mankamin'ny fefy karbôna aza ianao dia eritrereto izay tena miha mafy tokoa, tena mafy tokoa, izay tena tsara tarehy sy toy ilay tsipika mitete dia haitraitra mahafinaritra, rehefa mitondra fiakarana ambony sy midina havoana ianao dia tsy ilaina ny miala fotsiny ary ny anao Ho bisikileta dia mila bisikileta kely kokoa ianao ka tsy tokony ho mpivarotra latabatra toa ny 400 Costco bisikileta toy izao latsaky ny telo arivo dolara.
Azonao atao ny mahita bisikileta sasany eo amin'ny iray hetsy ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo dolara, napetrako teo ny lanezy efatra kireheta mba hahazoako bisikileta miasa tena tsara izay tsy tianao ny efatra lehibe sy efatra sy telo-polo lehibe ireto kodiarana ferris efatra hakiho ireto kodiarana no tadiavinao, tsy mila tampon'ireny kodiarana ireny koa ianao amin'ny farany mahazo hery bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampihenana ny kilao isaky ny santimetatra toradroa ny kodiarana amin'izay fenonao hatramin'ny efatra ka hatramin'ny fito eo ho eo tena ambany sy ambany. noho io ambany io, ny ankamaroan'ny paompy bisikileta dia tsy mamaky izany ambany loatra, ka mila fitaovana manokana mamaky ianao. Low psi izao mba hahatonga ny diany ho tsara kokoa, iray amin'ireo zavatra tsara indrindra azonao atao amin'ny bisikileta an-tendrombohitra ho an'ny bisikileta gravel r ary bisikileta matavy be kokoa no mahatonga ny kodiarana sy ny kodiarana tsy misy tubeless. Avoahy ny fantsona ary fenoy famehezana izany.
Ny antony mahatonga ny fahasamihafana lehibe amin'ny kodiarana lehibe toy izao dia satria nitombo inefatra ny lanjan'ny fihodinana, noho izany amin'ireo fantsom-bidy ireo dia milanja iray kilao ka hatramin'ny roa kilao isaky ny olona miresaka momba ny tombom-barotra azoko manodidina ny 8 ka hatramin'ny 16 na 20 pounds aza arakaraka ny haben'ny kodiaranao. Saika tsy maintsy ilaina izany ary mety handany $ 60 ny fiovana hitako fa nihatsara kely izy io, somary nahafinaritra kokoa, saingy ny fehiny dia mahafinaritra izany, mahafinaritra be izany, afaka mandeha ianao na aiza na aiza, toy ny ara-bakiteny na aiza na aiza. tsy misy olana, tsy misy olana, ampitainao toy ny tsy mila fantatrao momba ny tsy fanazaran-tena ratsy izany. Nanao ny tsy nety aho tamin'ny fieritreretana tamin'ny herintaona fa tokony hanao ny fiaretana maharitra efatra ora amin'ity iray ity aho na adiny roa aza amin'ity iray ity ary afaka adiny roa aorian'izay dia hanao zwift ora an-trano mandritra ny adiny efatra, saingy marina izany. mifantoka amin'ny fahefana fa adiny roa sy sasany no tena tadiavinao, ka vao mainka hadino izany ary ho any ivelany, safidy hafa mahafinaritra kokoa noho ny manao spaoro ao an-trano fotsiny.
Tiako ny Zwiftwhenako raha izany no hitanao nandritra ny antsasaky ny taona, ho mafy izany, mahafinaritra ary mahafinaritra anao ny mahazo ireto zavatra vitsivitsy ireto eto ambany miaraka amin'ny pedal voalohany nolazaiko fa afaka mampiasa trano fisaka ianao na ahoana na ahoana. afaka manao izay ataoko Amin'ny farany dia mametraka mpikapoka isegg aho satria be ny fialan-tsasatra, tsy dia manangona ny lanezy ary tiako ny mampiasa ireo mba hahafahako mametaka kiraro ririnina tena lehibe ary mampiasa ririnina tena lehibe. kiraro novolavolaina ho an'ny Fatbike mba tsy hangatsiaka ny tongotr'akanjo, fa ny zavatra mahafinaritra amin'izany dia rehefa manomboka manao teknika kely miaraka amina bisikilety an-tendrombohitra ianao dia azonao atoraka kely ny bisikileta raha tapaka ny tongotra Manaraka, ny ny menaka fanosotra amin'ny rojo dia tokony ho maina, tsy ny menaka fanosotra mahazatra izay amin'ny farany, ho an'ny bisikileta tri-nao na ny bisikiletanao dia ny antony mahatonga azy io dia ny fanosorana maina tsy miangona haingana toy ny menaka mando lena lena lena, rehefa mahazo maloto dia mahazo menaka maina maloto mila apetrakao matetika, ka ny sisa tsy maintsy ataonao dia j manadio izany amin'ny lamba famaohana, esory ny diloilo sy ny loto kely misy eo ary apetaho matetika kokoa ny menaka maina, na izany aza hitazomana azy tsy ho lasa tena mifikitra. Ny zavatra manaraka dia ny tavoahangin-drano foana, raha toa ianao ka mampiasa fatbikes ny ankamaroan'ny olona, ​​izay rehefa ririnina dia maniry tavoahangy misy rano misy insulated ianao, fantatro fa ny fomba sarotra rehefa nahavita ranomandry roa. Tamin'ny fotoana voalohany nandehanako nitaingin-tsoavaly ka tsy maintsy mitokana ianao, mbola milay ihany mandritra ny adiny roa ary ny zavatra farany hatolotro anao dia rehefa manomboka mangatsiaka be ianao, toy ny minus 12 Celsius, ka andao hiresaka momba ny zero Fahrenheit na mangatsiaka kokoa, makà fonon-tànana vita amin'ny bar, fantatra ihany koa amin'ny hoe pogies, fa tsy mahazaka rivotra izy ireo fa mihoatra ny bara, eto no amehezanao azy ireo ka voaorina tsara izy ireo avy eo ary ataonao ao ny tananao ary saika mangatsiaka indrindra. ny mari-pana, izay azoko atao eto ihany amin'ny fonon-tànana kely, satria mijanona ho tsara sy mafana fotsiny izy ao anatiny, toy ny wetsuit, koa ao ny lohasahiko vaovao -Type raha ampitahaina amin'ny bisikileta matavy Trek, tsara izany, tsara raha ny antsipiriany farany, tsy dia lafo loatra izany ary raha vantany vao vitako ny tubeless izao dia hanome maivana kely ho ahy araka ny hevitro, izay heveriko fa tena zava-dehibe ho an'ny olona bisikileta matavy, raha toa ka mandeha bisikileta matavy ianao na manana bisikileta matavy ary te hianatra ny fomba hahatonga ny kodiarana tsy hisy tubeur, mijery ny lahatsoratra eto ary avy eo ny zavatra farany farany dia handatsaka betsaka ianao, fa mandeha miadana indray ianao ka mahafinaritra ny tena trainiac rehetra, raha mbola tsy nisoratra anarana ianao dia tsindrio ny bokotra famandrihana avy eo
Mety amin'ny fanatanjahan-tena ve ny bisikileta matavy?
Bisikileta matavydiaLEHIBEfiofanana herinaratra amin'ny fananganana fiaretana hozatra. Miaraka amin'nymatavykodiarana, toera-panala ary fitaovana mavesatra kokoa noho ny fitaovana, misy bebe kokoa ny kodiarana amin'ny kodiarana ary mila mamokatra wattage bebe kokoa ianao hamadihana ireo pedal, hoy i Rusch.
Salama daholo, ity i Nate avy any Anchorage, Alaska, ary anio dia hizara ireo antony 5 voalohany tokony hanananao bisikileta matavy! Mahafinaritra ry zareo. Tadidinao ve tamin'izaho mbola kely ka te-hitondra kamiaobe? Avy eo azonao ny bisikiletanao voalohany ary nitaingenanao n'aiza n'aiza dia mody hoe mpamily kamiao goavambe ianao? (Raha tsy hoe misy kodiarana roa fotsiny ny kamio anao.) Eny, ny fatbikes dia toy ny zaza indray.
Afaka mivezivezy amin'ny oram-panala, fasika, fotaka, rano ianao, miaraka amin'ny tsiranoka lehibe mitovy amin'ny tavanao. Afa-tsy amin'ity indray mitoraka ity dia tsy mila mangataka kamiao vaovao amin'ny ray aman-dreninao ianao isaky ny Krismasy. Antony # 2.
Mora miovaova ianao. Rehefa miempo ny lanezy dia tsy tapitra ny fahafinaretana. Rockshox, Wren ary Manitou dia manana karazana forks fampiatoana manaitra azo isafidianana.
Tena hanampy tokoa ireo raha ny tsy fisian'ny orampanala no mahatonga ny lalambenareo ho feno volo sy miorim-paka. Raha ny hafainganam-pandehananao dia misy safidy maro ho an'ny sisin'ny habe miampy ny orinasa toa an'i Easton, WTB, ary Sun Ringle. Inona no atao hoe rim plus size? Hevero ho toy ny sisin'ny ratra io.
Tsy tena sisin'ny bisikileta matavy izy io, ary tsy boribory bisikileta an-tendrombohitra tonga lafatra. Eo anelanelany no misy azy - mazàna manodidina ny 40-50mm miaraka amin'ireo kodiarana izay miditra amin'ny 2,8 na 3 santimetatra.
Haingam-pandeha lavitra noho ny kodiarana bisikileta matavy, nefa mbola ampy handoavana ireo bontsibontsina ihany. Raha mahatsapa ho mpihaza ianao, dia azo ampiasaina amin'ny bisikileta koa ny bisikileta tavy - ataovy toy ny kitapom-batsy fa miaraka amin'ny bisikiletanao hitondra ny fitaovana mavesatra rehetra. Misy olona an-taonina maro izay mampiasa ny fatbikes-ny kodiarany mba hivoaka sy hanao fitsangantsanganana tsara! Zahao fotsiny ilay bikepacking tenifototra Instagram hahitako izay tiako holazaina. # 3.
Tsy matavy izy ireo, manana taolana lehibe. Eny ary, rehefa nanomboka ny bisikileta, hanaiky aho fa mavesatra kely izy ireo. Tsy izany intsony no izy.
Ny ankamaroan'ny bisikileta matavy amin'izao fotoana izao dia milanja lbs 30 lbs, na dia ireo maodely alim-baravarana miditra aza. Raha mahatsapa tena tsara ianao dia afaka mahazo bisikileta misy tavy karbaona milanja 20 lbs na latsaka! Mitovy lanja amin'ny bisikileta hazakazaka antonony izany! Misy lafiny karbonina ara-bakiteny saika ho an'ny aluminium rehetra izay tianao havaozina. # 4.
Fahasamihafana. Raha teo ny bisikileta matavy voalohany dia voafetra ho orinasa iray na roa fotsiny ianao. Amin'izao fotoana izao dia manana an'ity karazany marobe ity ianao, azo atokana ho an'ny fampiasana ampiasainao indrindra.
Manana bisikileta matavy amin'ny ankamaroan'ny mpamokatra bisikileta lehibe rehetra ianao ary bisikileta matavy be dia be avy amin'ny orinasa kely kokoa. Ahoana ny fomba hisafidianako ny tsara? Ny zavatra tsara tokony hatao dia ny mankany amin'ny fivarotana bisikileta eo an-toerana ary andramo! Ny bisikileta rehetra, ao anatin'izany ny bisikileta matavy, dia safidin'ny tena manokana izay tena sarotra fantarina nefa tsy mahita sy manandrana ny vokatra. Tohano ny fivarotana bisikileta eo an-toerana ary avelao izy ireo hanampy anao hahita ilay bisikileta matavy lafatra ho anao. # 5.
Fiaraha-monina. Ny bisikileta matavy dia sasany amin'ireo olona be mpakaiza indrindra sy mahafinaritra indrindra amin'ny fiarahamonina bisikileta. Mazava ho azy: mametraka olona amin'ny bisikileta ianao izay mametraka tsiky eo amin'ny tarehiny dia ho gaga izy ireo! Betsaka ny vondron'ireo mpitaingina bisikileta matavy ao amin'ny Facebook, Mtbr, Reddit ary maro hafa, vonona hanampy ireo bisikileta matavy iray hafa mila fanampiana na zazakely vao hidina amin'ny tany.
Toeram-pivarotana bisikileta maro eraky ny firenena izao no manana fitsangatsanganana vondrona ririnina izay iarahan'ny mpitaingina ambaratonga fahaiza-manao sy fotoana mahafinaritra amin'ny bisikiletany ihany. Raha maniry fifaninanana kely amin'ny fifangaroana ianao dia vintana ihany koa. Ny mpitaingina bisikileta an-dàlambe sy mpitaingin-tsoavaly an-tendrombohitra dia nahita fotoana lasa izay fa tsy mahafinaritra fotsiny ny mitaingina bisikileta matavy, fa koa ho an'ny fahasalamana! Izany no mahatonga ny hazakazaka bisikileta matavy eran'ny firenena, ary ny lehibe kokoa toa ny Fatbike Nationals sy Fatbike-Birkie.
ny fomba fanapahana kaloria 500 isan'andro
Raha mbola mijoro eo amin'ny fefy ianao rehefa mividy bisikileta matavy, dia manana fomba voazaha toetra aho ary azo antoka fa handresy lahatra anao. Mandehana iray. Na fanofana bisikileta avy any amin'ny fivarotana bisikileta eo an-toerana izany na mindrana amina namana mandritra ny faran'ny herinandro, miloka aho fa ho tianao izany! Mandra-pahatongan'ny fotoana manaraka dia i Nate avy any Anchorage ary ho hitanay eny amin'ny làlana ianao!
Aiza no anaovana bisikileta fatback?
Hojerentsika izay mahaforona ny bisikileta rehetra amin'ny tavy matavy. Ary antenaina fa noho ny fanampian'ny manam-pahaizana manerantany dia hianaranao ny mitondra fiara. Ny bisikileta kodiarana matavy no fanatanjahan-tena amin'ny ririnina vaovao, fa tsy ny bisikileta mijery ririnina ihany no fantatry ny besinimaro noho ny endrika mampiavaka azy indrindra, ny kodiarana tena matavy.
Indraindray dia mila antso fanairana ianao hampatsiahivana anao fa tonga ny fotoana hiainana amin'ny lisitry ny niainany an-kalamanjana. Miaraka amin'ny fanampian'ny manam-pahaizana vahiny izay antenaina hanome anao aingam-panahy hanandrana ho anao. Izaho dia Bill Rooney.
Io no fiainana ao amin'ny No Huddle. Faly be izahay fa manana ny Expert nasainay anio. Tompondaka amin'ny bisikileta an-tendrombohitra indroa i Mexico, mpitaingina bisikileta matihanina ary mpampiofana miavaka, Tony Baca.
Tsy mbola nandeha bisikileta matavy aho. Nandeha bisikileta an-tendrombohitra kely aho, saingy mbola tsy nitaingina lalana tsy dia mora loatra. Nitaingina bisikileta izahay hatramin'ny mbola kely, ka karazana natiora faharoa, fa (chuck les) midina tendrombohitra? (Mozika rock) Aiza isika Tony? - Ka eo amin'ny Picasso Trail Hike isika izao ary efa ho iray mahafinaritra isika amin'ny bisikileta vita amin'ny kodiarana matavy - Eny ary, jereo ity ny dikanteniny, ny kinovako dia sambany aho tamin'ny bisikileta vita amin'ny kodiarana matavy ary mahafinaritra be ry zareo. (mihomehy) - Avelao aho hijery.
Apetrako eto izany. Karazana fitsipiky ny ankihibe raha te hanao zavatra malaky ianao, ka eto no alehanao. Aza miondrika na zavatra hafa, manohy mahitsy fotsiny. - Eny - Ary apetraho hatrany ambany.
Ity rantsan-tànana ity dia tokony ho eo afovoany eto - Ah - Toy ny hoe efa akaiky dia akaiky? - Eny - Lavorary izany. Izany. - Eny.- Sahala amin'ny mijanona mahitsy, mijery aloha ary avy eo dia ataonao ny sandry.
Okay, ka tsy maintsy midina kely izy io. - Eny.- Okay.- Ka dia mitondra an'io foana ianao? - Ie, manandrana aho satria tsy fantatrao mihitsy.
Ka andao andramana izany, jereo izay nataony fafect. Ento miverina amin'ny alàlan'ny loop hafa izany ary apetraho eto. Bebe kokoa.
Lafatra izany. Rehefa manomboka ianao dia raiso ity, kitiho ary manohy mametaka. - Mora dia mora.
Eny ary, mihodina aho. - Ie, mihodina toy izany fotsiny ary tonga lafatra. Tsara. - Okay. - Zavatra iray hafa koa Thing.
nodorana ny kaloria bisikileta
Ny ankavanana dia ny vakinao famakiana ary ny ankavia dia ny eo aloha. Ity frein ity, matetika ianao no mampiasa ilay ao aoriana. - Okay, okay - Ary ity izao indraindray, indrindra rehefa midina ambany ianao, ary noho izany rehefa mamaky eo alohan'ilay Voalohany ianao dia tsy manao an'io ny kodiaranao eo aloha dia mianjera ianao.
Okay? - Okay.- Ka toy izao. Ka raha midina ianao dia ho eto ary hitovy amin'izy roa.- Hitako io fihetsika io.- Eny, eny. - Tsy fantatro mihitsy hoe inona izany.- Tsy fantatro raha nolazaiko izany, fa amin'ny bisikileta ity no fiarovan-doha.- Ah.- Raha tsy manana fiarovan-doha ianao dia tsy mieritreritra ny mitaingina akory. - Okay.- satria afaka mamonjy ny ainao izany - Ah. - Eny, zavatra iray ihany koa izay ataoko, indrindra amin'ny bisikileta an-tendrombohitra, rehefa mandeha aho dia mitondra fonon-tànana.
Raha lavo ianao dia hiaro ny tananao izany, ary elaela vao sitrana ny tanana. (mozika mavitrika) - (mihomehy) Mandeha lavitra aho. Nahafinaritra tokoa iny.
Tsara izany. Tokony ho hitanao aloha ny fifandanjanao. Eny, andao handeha. - Okay, ka alao antoka fa manondro avy hatrany ny vatanao ianao. - Eny - fa tazomy eo anelanelan'ny tongotrao ny laselyo ary ampiasao izy io handravana matetika.
Somary manjombona ity iray ity, fa ny vatanao mihozongozona.- Okay.- Raha mbola miakatra ianao dia apetraho eo ny vatanao.- Mandrosoa, marina.- Eny, mandroso.- Rahoviana ianao no hiakatra? OK.
Azoko. Ie. Namboarina nidina ny havoana.
Tsara izany. Hey, mpandala ny nentin-drazana aho. (Bill chuckles)) - Fampitandremana, Liona an-tendrombohitra.- Eny.
Eny ary, manantena isika fa tsy hahita na iza na iza androany.- Eny.- Raha vantany vao misento aho.
Eny, misy asa vitsivitsy eto. Tsara.- Ny zavatra, azonao izany.
Nahafinaritra tokoa iny. Misaotra anao. Ankasitraho izany.
Fantatrao fa, ny zavatra niainako dia toy ny Schwinn misy kodiarana fanazaran-tena, ary inona avy ireo zavatra ireo niaraka tamin'ny bara marindrano tamin'ny mbola kely? Izy ireo no zavatra kely ary nanana ireo seza fisaka ireo. Ratsy be. (Mozika rock) Ianao 'manandrana maka sary ahy hafa fotsiny ve ianao rehefa mianjera? - Raha lavo ianao dia tsy maninona - Mahafinaritra be amin'ny lanezy izany - Izany no izy - Ary ny fampihetseham-po lehibe indrindra nomenao ahy dia ny niampita ny bar.
Misy fikafika ve? Matetika aho mifoha fa tsy mifoha ianao. - Tsia, tsy amin'ity iray ity. Karazan-fisaka izany, ka ahodino somary miverina kely ny vatanao amin'izay ahafahanao mihetsika eto rehefa feno fotaka be izy.
Apetrakay mihemotra telo amn'ny vatana ny vatana, tsy miverina intsony, toy ny hoe hidina ambany ianao, tsy ny tsindry rehetra eo amin'ny kitapom-baravarana sy any aoriana.- Ah.- Fantatrao ve? Rehefa midina ambany ny raharaha, miverina hatrany.
Rehefa miakatra mandroso hatrany amin'ny vatana amin'ny toerana samihafa ny dep, dia miafara amin'ny terrain.- Mazava ho azy fa handeha toy izao aho.- Eny.- Marina? Fa tiako izany? - Raha mandeha eo afovoany ianao dia mety ho fotaka. - Ka mahatsiaro tena ho ahy aho, 'voafehiko. - Marina indrindra. - Okay. - Ie. - Aleo aho manandrana.
Ie. - Andao. Pedal, pedal, pedal.
Tsia, tsia, tsy maninona. Tsy mahafinaritra izany. - Ankizy mpitaingina lalana sasany eto, mianatra fotsiny aho.
Mianatra fotsiny aho. Raha lehilahy hitanao aho fa tsy miresaka taona, tsy miresaka taona aho fa tadidiko fa nanao fikarohana tsara tamin'i Ed Sullivan's saingy nanolotra karazana pataloha bisikileta aho. Padded izy io.
Ka raha efa nahita ny Beatles tamin'ny fahitalavitra ianao dia makà kilaoty fohy. Hamarino tsara fa tsy tery loatra sy tsara endrika izy io. (Giggles) Miadana miadana izahay.
Tokony hataonao amin'ny mihetsika haingana ity. (Tony mihomehy) Manafaingana izany. - Tsara .- Okay.- Tsara izany.- Tony.- Andao hisotro rano.- Salama aho.- Aza adino ny rano.
Hydration.- Okay. Nahazo fiofanana tsara avy aminao aho androany.
Misaotra anao, tiako holazaina fa matotra aho. Misaotra anao.- Eny, na oviana na oviana.
Na oviana na oviana ary fahafinaretana mampianatra anao ny fototra, manandrana manazava aho fa niasa fa nahazo ny nomeraon-telefaonako ianao raha mila zavatra, torohevitra na zavatra hafa, ampahafantaro fotsiny ahy. - Misaotra. Raha te hanararaotra an'ity rangahy ity ianao sy ny fahalalany ary ny coaching azony atao dia afaka mitsidika ny tranonkalanao marina izy? - Ya.
Manana tranokala aho, eltonybaca.com - Cool. (Tony mihomehy) Tsara izany, mamporisika mafy an'ity lehilahy ity aho - Misaotra betsaka - Tsara, nahafinaritra be izany.
Tsy fantatro ny fomba tiako hamaly an'ireo làlana eny ary raha ny marina, tsy nanao tsara ny tiako aho, saingy nahavita tsara aho mba handreseko manokana. Misaotra anao nijery ity fizarana voalohany ity. Midika zavatra be dia be ho antsika rehetra izany.
Araka ny efa hitanao dia manana an'ireto manam-pahaizana mahalala ny teknika ireto izahay, saingy tsy mila mahatsapa tena ho manana endrika ambony ianao hanombohana ireo zavatra ireo. Ny hoe mivoaka any fotsiny dia manao azy, na manomboka fotsiny, amin'izay dia mety ho C lehibe ianao amin'ny fandraisana anjara amin'izay hataontsika. Azafady mba omeo anay ny hevitrao etsy ambany dia hamaly izahay, ary hiara-hamaky anao aminao amin'ny fahalianana indrindra aho.
Manome toky anao aho fa. Lazaiko aminao fa mahatoky tena bebe kokoa aho ary milamina kokoa. Mihevitra ve aho fa vonona amin'ny hazakazaka? (mozika manentana ny fanahy)
Inona no mahatonga ny bisikileta matavy tsara?
BIKES FATBACKNY FAT LEGENDARYMITOKYMARTSA AVY AMIN'NY ANCHORAGE, ALASKA.
Fa maninona no lafo be ny bisikileta vita amin'ny kodiarana?
HO AN'NYbisikileta kodiarana matavy, afaka manomboka amin'ny $ 400 ka hatramin'ny $ 3000 izy ireo. Ny antony nandaniany volatoy izanybetsaka ny noho ny fanaingoana tsy maintsy ataon'ny orinasa hamoronana nybisikileta. Zavatra toy ny frame,Tires, ary ny peratra sy ny freins dia natao manokana avokoa.
Mendrika ve ny bisikileta kodiarana matavy?
Famaranana.matavybisikiletaTiresdia fomba fitaterana mahafinaritra. Izy ireo dia mitazona tsara ny tany tsy mitongilana ary mamela ny mpitia fanatanjahan-tena hanao fampihetseham-batana tsara na dia rakotra lanezy aza ny tany.Môtô kodiarana matavydia azo antoka kokoa nohobisikileta, manome sehatra fifandraisana bebe kokoa.
Sarotra kokoa ve ny mandeha bisikileta matavy?
Ny olona sasany tena maniry abisikileta matavymankamin'ny lalana iraybisikiletaamin'ny fivezivezena amin'ny arabe satria ny kodiarana midadasika kokoa sy ny tsindry ambany dia mahamety kokoa sy malefaka kokoamitaingina. Ny fitomboan'ny lanjany dia miterakabisikileta matavy kokoamandeha tongotra amin'ny lalana mahazatra, toy ny asfalta sy ny rarivato.11 2017.
Inona no tombotsoan'ny bisikileta kodiarana matavy?
nymatavyNy bisikileta dia hanana ondana, tanjaka ary fampiononana bebe kokoa amin'ny dianao. Raha tototry ny lanezy sy ny ranomandry ny lalanao dia ireo no safidy tsara indrindra ho anao. Amin'ny ankapobeny ianao mivarotra mora sy hafainganana amin'ny fanoherana ambany dia ambany amin'ny fihodinana. Ny lanjany fanampiny dia mifandanja amin'ny fampiononana fanampiny rehefa mitaingina anao.
Ridley dia marika bisikileta tsara ve?
Ridleybisikileta noLEHIBE. Vao nividy iray aho ary tena tiako. Fivarotana izay manary fako hafamarikaolona ratsy fotsiny. Tao anatin'ny taona vitsivitsy taorian'ny niovanymarika, hanaparitaka ny bisikileta amidiny izy ireo anio.
Afaka mitaingina bisikileta kodiarana matavy amin'ny lampivato ve ianao?
Ny valiny fohy dia, Eny.Bisikileta matavymiasa tsara amin'ny sehatra milamina arylampivato.izy ireotsy hanao fampisehoana koabisikiletaizay natao manokana ho an'io faritra io, fa ny ankamaroan'ny olona dia mora mora ny mitsambikina abisikileta matavyary mandeha manodidina ny faritra misy azy ireo nefa mbola mahazo aina.
Iza no fatbike tsara indrindra eto an-tany?
Ny tampon'ilay salan'isa saika ny karbaona rehetra Diamant F1-LTD dia navoaka tamin'ny 2016 mba hamerenany hevitra. Mino izahay fa ity bisikileta ity no ho Worlds Lightest Production Fatbike ary hampanofa ity bisikileta ity indray amin'ny taona 2018/19 ho an'ireo mpitaingina mahay (ekena mialoha ny baiko). Ny Diamant Mammut F1 raha tadiavinao ny tsara indrindra dia ity. XX1 manana superbike 1 x 11 superbike!
Aiza no hividianako bisikileta matavy any Aostralia?
Ny Outdoors International dia niara-niasa tamin'ny Diamant ary nanangana Diamant Fatbikes tamin'ny martsa 2014 voalohany ho an'i Aostralia sy Nouvelle-Zélande! Ny bisikileta diamant dia misy amin'ny fivarotana bisikileta voafantina, an-tserasera amin'ny www.fatbike.com.au ary ambongadiny amin'ny alàlan'ny Outdoors International Pty Ltd, Phone 1300 328 2453.
Aiza no hividianako bisikileta Fat Fat?
Ny bisikileta diamant dia misy amin'ny fivarotana bisikileta voafantina, an-tserasera ao amin'ny www.fatbike.com.au ary ambongadiny amin'ny alàlan'ny Outdoors International Pty Ltd, telefaona 1300 328 2453. Ny bisikileta Fat Tyro AKA Fatbikes dia tsara ho an'ny morontsiraka, fasika efitra, lanezy, tokan-tena lalana na bisikileta fitetezana tanjona rehetra.